RASMI: Chelsea Oo Lasoo Saxeexatay Xiddiga Atletico Madrid Ee Saul Niguez - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaRASMI: Chelsea Oo Lasoo Saxeexatay Xiddiga Atletico Madrid Ee Saul Niguez
RASMI: Chelsea Oo Lasoo Saxeexatay Xiddiga Atletico Madrid Ee Saul Niguez
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa u muuqata in saacadaha kooban ee ka hadhay waqtiga uu xidhmayo suuqa iibka ciyaartoyda ee xagaagan, in ay ku guuleysanayso saxeexa xiddiga reer Spain ee Saul Niguez oo ay hadda ku jiraan Atletico wada-hadallo heerarkii u dambeeyey ee gabogabada maraya.
Blues oo dedaal badan ku bixisay difaaca Faransiiska ee Jules Kounde, isla markaana waqti dambe iskaga talo-baxday kaddib markii ay Sevilla adkaysay saxeexiisa ayaa waxay u jeedsatay Saul Niguez oo ay Atletico Madrid kaga doonayso heshiis amaah ah.
Sida uu qoray wargeyska Daily Mail, labada kooxood ayaa heshiis buuxa ka gaadhay 26 jirkan, waxaanay Atletico ogolaatay in xilli ciyaareedak 2021-22 uu Saul Niguez amaah ku tago Stamford Bridge, laakiin ma cadda in heshiisk lagu daray qodob u ogolaanaya Blues inay si rasmi ah ula wareegto marka uu dhamaado sannadka amaahda.
Atletico Madrid ayaa la rumaysan yahay in ay doonayso inay ilaashato 26 jirkan oo uu dib ugu soo laabto marka uu soo dhamaysto heshiiskiisa amaahda ee Chelsea.
Warka ayaa intaa ku daray in Saul uu isagu dabada ka riixayo in Atletico Madrid ay amaah ama iib mid uun ku bixiso si uu uga qayb-galo Koobka Adduunka 2022, taas oo si uu u xaqiijiyo uu u baahan yahay inuu helo boos joogto ah.
Tababare Diego Simeone ayaa kaydka u diray Saul Niguez qaybtii dambe ee xilli ciyaareedkii hore, waxaana uu laacibkani isku qanciyey in aanu boos ka helaynin Wanda Metropolitano.
Si kastaba, illaa caawa saqda dhexe oo uu furan yahay suuqa iibka ciyaartoyda ayaa la filayaa in Chelsea ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo dhamaystirka heshiiska Saul. Halkan ayaad kala socon doontaa wixii kasoo kordha.